Enterprise Rent-A-Car opens in Aruba, Panama, expands in Brazil | Breaking Travel News
Ikhaya » izithuba » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » I-Enterprise Rent-A-Car ivula eAruba, ePanama, iyanda eBrazil
Iindaba zokuhamba zeAruba • Iindaba zokuhamba eBrazil • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Iindaba zokuQasha iMoto • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • omnye • Iindaba zokuhamba ePanama • Iindaba zoKhenketho • Iindaba zothutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba
I-Enterprise Rent-A-Car ivula eAruba, ePanama, iyanda eBrazil
Oktobha 21, 2020
Ukubanjwa kwamashishini ibhengeze namhlanje ukuba iflegi yayo Ishishini Rent-A-Car uphawu luvule iindawo zalo zokuqala eAruba nasePanama, kunye namasebe angama-25 ongezelelweyo eBrazil. Iindawo ezintsha-esele zithathe ugcino-zijoyina iNational Car Rental kunye neAlamo Rent A Car brand kuwo omathathu la mazwe. Amashishini abambe zonke iimveliso ezintathu.
Icandelo le-Enterprise Rent-A-Car ePanama lifumaneka kwisikhululo senqwelomoya iTocumen kwiSikhululo senqwelomoya sasePanama- esinye sezikhululo zeenqwelomoya ezixakekileyo kuMbindi Merika nendawo ephambili kubakhenkethi abaninzi beshishini. E-Aruba, enye yeendawo eziphambili zokuhamba kwabahambi abavela eUnited States, indawo entsha ise-Queen Beatrix International Airport e-Oranjestad.
Amasebe amatsha eBrazil anyusa ubukho be-Enterprise Rent-A-Car kweli lizwe ukuya kwiindawo ezingama-77. Uhlobo lukhule ngokukhawuleza eBrazil, eyona ntengiso inkulu eMzantsi Melika; Zonke ezi ndawo zivuliwe ukusungulwa kweBrazil kwi2019.
Ukuvuleka konke kuyinxalenye yenkqubela phambili yenkampani eLatin America naseCaribbean. I-Enterprise Rent-A-Car yenze amatyala ayo kwiCaribbean ngo-2014 kwaye yandiswa yaya kwiLatin America kungekudala emva koko.
Abathengi abaya eAruba nasePanama banokonwabela ngakumbi ukufumana kunye nembuyekezo ngokwandiswa kweenkqubo ezimbini zokunyaniseka: I-Enterprise Plus ngokusebenzisa uphawu lweShishini lokuQasha i-A-Car, kunye neklabhu ephumelele amabhaso ye-Emerald Club ngohlobo lweSizwe lokuQasha iMoto.
"I-Aruba, iPanama kunye neBrazil ziyinxalenye yokukhula okuqhubekekayo kwihlabathi liphela, njengoko sifuna ukusebenzela amashishini kunye nabakhenkethi bokuzonwabisa ngokufanayo naphi na apho bakhoyo ehlabathini," utshilo uPeter A. Smith, usekela mongameli we-franchising yehlabathi kwi-Enterprise Holdings. “Njengokuba ezi ndawo zivulela iinqwelomoya, sizinikezele ekunikezeleni abathengi bethu inkqubo yokuqesha ekhuselekileyo, efanelekileyo neqiniswayo yinkonzo yabathengi ekumgangatho wehlabathi. Kwaye, njengokuba abathengi beqala ukuhamba kwakhona, ukwandisa ukubakho kwe-Enterprise Plus kunye ne-Emerald Club yenye indlela yokubabulela ngeshishini labo. ”